'Adda cituun Intarneetii jiruufi jireenya keenya danqe' - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Tajaajilli intarneetii daataa moobaayiliin hojjetu adda cituu isaatiin jiruufi jireenya lammiilee danqameera
Tajaajilli intarneetii daataa moobaayiliin hojjetuu adda cituu isaatiin sirna barnootaa dabalatee jiruufi jireenya keenya irratti dhiibbaa uumeera jechuun jiraattoonni magaalota gurguddoo Itoophiyaa BBC'tti himan.
Fakkeenyaaf, Itoophiyaatti dhaabbileen karaa Intarneetiitiin carraa hojii beeksisan lakkoofsaan muraasa yoo ta'u, fedha hojii dhabdootaa fi namoota hojii haaraa barbaadanii wajjin wal hin gitan.
Adda cituun tajaajila Intarneetii mobaayilaa ammoo odeeffannoodhuma dhaabbilee muraasa kannee irraa argamuyyuu daangesseera jedhu fayyadamtoonni.
Magaala Hawaasaatti hojjettuu Baankii kan taate Lidiyaa Saamu'eel hojii jijjiirachuuf dur marsariitiiwwan hordofaa turte. Amma sababa adda cituu daataa moobaayilaatiin odeeffannoo argachuuf rakkachuu dubbatti.
Kana malees ''barnoota digirii lammaffaa koo xumuruuf qo'annoon gaggeessuuf odeeffannoo na barbaachisan dubbifachuuf hojiidhaa baheen manneen tajaajilli Wifi jiru barbaadaan oola. Kun ammoo yeroo koo bayyee na jalaa gubaa jiras'' jetti Lidiyaan.
Namoonni Maatiin isaanii biyya ambaa jiranis adda cituu Intarneetii moobaayilaatiin, hariiroon maatii isaanii wajjin qaban hir'achusaa dubbatu.
''Haatii, abbaan koofi obolaan koo Ameerikaa jiraatu. Kunoo gincii daataa mobaayilii fayyadamuun erga oolee ji'a lama ta'eera. Dur guyya lamattis sadittis feesbuukii fi malawwan kanneen birootiin wal argina ture.
Amma garuu yoo sarara bilbila koon naa bilbilaniin alatti wal hin arginu. Bilbilaan haasa'uun ammoo gatii guddaa si kaffalchiisa,'' jedha Jiraataan magaalaa Giincii.
Gara Lixa biyyattiittis erga Intarneetii moobaayiliin fayyadamuun addaan citee, ji'a lama akka ta'e kan dubbattu barattuun Yunivarsiitii Haroomayaa Galaane Fufaa, kana dura dhimmoota barnootaa fi kan biraatiif fayyadamaa akka turte dubbatti.
Amma hojjechuu dhabuun intarneetii karaa mobaayilaa adeemsa baruufi barsiisuu irratti dhiibbaa qaba jetti.
Jiraataan Magaala Adaamaa kan ta'e Beenyaa Dhaabaa, rakkoo siyaasa biyyattii keessatti dhalachaa jiruuf jecha intarneeta irratti uggurra gochuun furmaata ta'uu hin danda'u jedha.
'Finfinee qofatti hojjata. Saniyyuu dhiibbaa jalaa bahuuf jedhanii hayyaman. Duruu biyyattiin itti fayyadama intaneetiitiin sadarkaa gadi aanaarratti argamti.
Amma ammo isuma bilbilaan fayyadamnu kana cufuun dubbicha akka 'fanxoorratti cophoxoo' jedhan sana godha. Ejjennoon kun haawasa qofa osoo hintaane biyyattii mataasaa galii dhabsiisaa,'' jedha Beenyaan.
Goodayyaa suuraa Itiyoo Telekoom, Itoophiyaatti dhaabbata tokkicha tajaajila intarneetii kennudha
Jiraataa Magaala Maqalee kan ta'e Fistum Birhaane ammoo Maqalee fi nannoo Tigraay keessattis erga Univarsiitii Adigiraatitti ji'a lama dura jeequmsa ka'ee tajaajila intarneetii Birood baandii malee bilbila moobaayilii fi CDMA fayyadamuun hin danda'amne jedha.
Odeeffannoowwan haaraa waayee taateewwan biyyattii fi biyyattiin ala jiruu, Feesbuukii fi miidiyaaleen hawaasummaa biroo bilbila mobaayilaatiin argachuun waan hin danda'amneef ergaa Finfinneedhaa karaa namaatiin nuuf ergamuun bilbilaan nutti himama jedhan.
''Maaliif akka tajaajilli kun adda cite wanti beeknu hin jiru. Tilmaama kootiin garuu rakkoo nageenya biyyattii mudate akka hin babal'anne ta'uu mala jedheen yaada. Sababa kamiifuu garuu Inatrneetii cufuun furmaata waaraa hin ta'u'' jedhan obbo Fistum.
Kana maleess jiraataan Maagaala Dassee maqaansiinii akka hineeramne gaafataniifi hojii daldalaatiin jiraatan, Intarneetiin Mobaayilaa erga adda citee ji'a lamaa ol ta'uusaafii hojiilee daldalaa isaanii akka miidhee dubbataniiru.
Miidiyaalee mootummaan alatti madda odeeffannoo kan ta'an miidiyaalee hawaasaa hordofuun rakkisaa ta'eeeras jedhaniiru.
Dhimma adda cituu mobaayilaan Intarneeta magaaloota gurguddoo garaa garaa kana ilaalchisuun hoogganaa quunnamtii hawaasaa Itiyoo Telekoom Obbo Abdurraahiim Ahimad yaada isaanii gaafannee turre.
Baay'ina hojiitiin battallatti nuuf himuu akka hin dandeenye dubbachuun boodas yaaliin irra deddeebiin torban lamaaf karaa bilbilaatiin taasifne osoo nuuf hin mirkanaa'in hafeera.